1981 ducat ဒင်္ဂါး 1 - မြိုးကွဲသူ
1981 ducat ဒင်္ဂါး 1 - မြိုးကွဲသူ
ဓာတ်ပုံ 1981 အတွက်အကြွေစေ့ 1 ကိုရွှေအပိုင်းအစတစ်ခုပုံရိပ်ကိုပြသထားတယ် - မြိုးကွဲသူ
ရှားပါး: Value တစ်ခု:
အကြွေစေ့ 1 ducat 1981 - မြိုးကွဲသူ
အလေးချိန် :. 8,60 ဂရမ်
ထူ: 1,7 မီလီမီတာ
အဆိုပါအချင်း: 22,6 မီလီမီတာ
သတ္တု: au - ကိုရွှေနမူနာ 900
အပိုင်းအရေအတွက်: ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်ဘဏ်မှ 3213-0009
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်: 14500 ရူဘယ်
Chervonets "ဒီမြိုးကွဲသူ" လို့တော်ဝင်မိသားစု ducat ကဲ့သို့တူညီသောပစ္စည်းကိရိယာများကတည်းကသည့်ဒင်္ 10 ရူဘယ်၏တော်ဝင်အကြွေစေ့၏အမွှာညီအစျကို, ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအကြွေစေ့အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံရိပ်က proletariat ကိုယ်စားပြုတယ်။ 1975 ခုနှစ်ကနေ 1982 ခုနှစ်မှဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဘဏ်မှဆိုဗီယက်ကိုရွှေအပိုငျးပိုငျး၏ပုံတူလုပ်ကြံခဲ့ကြခြင်း, 1923 နမူနာအ RSFSR ၏အထိမ်းအမှတ်နှင့်အသစ်ရက်စွဲများနှင့်အတူလွှတ်ပေးရန် Novodel ducats ၏စုစုပေါင်းစောင်ရေ 6.6 သန်းမိတ္တူရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်ဖို့သစ်ကိုကိုရွှေဒင်္ဂါးပြားရောင်းချနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 7,742 ဂရမ်အလေးချိန်ရှိရွှေစင်ဒင်္ဂါး။ (0.23 အောင်စ) ။ သည့်ဒင်္ကိုရွှေအပိုငျးပိုငျးမော်စကို (MMD) နှင့်လီနင်ဂရက် (LMD) Mint ။ 1923 နှင့် 1975-1982 အတွင်းအကြွေစေ့ "ဒီမြိုးကွဲသူ" ၏ parameters တွေကိုအဆိုအရနမူနာရဲ့တူညီ, သူတို့ရက်စွဲ၌သာကွာခြား။
1 ducat ၏ဂိုဏ်းဂဏ၌ သာ. ကိုရွှေဒင်္ဂါးပြားကိုကြည့်ပါ
10 ရူဘယ် 1773, ထိုအကြွေစေ့၏စျေးနှုန်းတန်ဖိုးကို
20 ပီဆိုလွှတ်ပေးရန် 1994, မက္ကစီကို
1970 ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာ 20 Penny - စျေးနှုန်းကိုအကြွေစေ့၏တန်ဖိုး